Dowladda Maraykanka oo Cunaqabatayn saartay Saraakiil ka tirsan Ururka Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Dowladda Maraykanka oo Cunaqabatayn saartay Saraakiil ka tirsan Ururka Al-Shabaab
Ahmed Iman Ali oo loo yaqaan Abu Zinira
WASHINGTON – Dowladda Maraykanka ayaa liiska argagaxisada ku dartay laba sarkaal oo kale,kuwaasoo ka tirsan taliyayaasha ururka Al-Shabaab.
Maraykanka ayaa xubnahan cusub u aqoonsaday argagaxiso caalami ah,waxayna kala yihiin Axmed Iimaan Cali iyo Cabdifitaax Abuubakar Cabdi.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in ay halis weyn ku yihiin amniga muwaadiniinta Maraykanka,amniga qaranka Maraykanka,siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha Maraykanka.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in Axmed Iimaan Cali uu madax kasoo ahaa garabka Kenya ee ururka Al-Shabaab tan iyo sannnadkii 2012kii isla markaana uu soo agaasimay hawlgallada ururka ee gudaha Kenya.
Waxaa lagu sheegay warka qoraalka ah ee kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Maraykanka in hawlgallada uu maleegay ay bartilmaameedsadeen weerarkii lagu qaaday ciidamada Kenya ee magaalada Ceel-Cadde.
Dhanka kale Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in sannadkii 2015kii ay Kenya liiska argagaxisada ku dartay Cabdifitaax Abuubakar Cabdi iyadoo la tuhunsan yahay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab taliyayaashiisa Kenya.
Waxaa kaloo la doonayaa in uu ku lug lahaa weeraradii dadka badan ku dhinteen ee sanadkii 2014-ka lagu qaaday Mpeketoni-Kenya,weerarkaas waxaa ku dhintay dad ku dhow 60 qof.